Faysal Rooble: Caliyoow Adigu ha Dumin Muqdisho oo Muqdisho ka Dhowr Dhibta! – Radio Daljir
Faysal Rooble: Caliyoow Adigu ha Dumin Muqdisho oo Muqdisho ka Dhowr Dhibta!
Abriil 18, 2021 9:58 g 0
Caliyoow isbarbardhig iga hoo: 1970kii qayd ayaad xidhnayd oo maqal adhi ah ayaa la joogtay, maantana meelo aan ogahay ayaad warka u kala qaadaa. Anna 1970kii 15 May iyo Sakhaawudiin Sare ayaan macalin ka ahaa. Ardadii aan aflixiyey waa safiiro, injineero iyo wasiiro. Waxaan Muqdisho ku soo biiriyo mooyee wax kama ridin.
Muqdisho waa magaalo madaxda Soomaaliya. Inta fahmi karta ama wax akhrida Muqdisho waa wax cilmiga ku aadan magaalynta ama “urbanization” la yidhaa “REGIONAL PULL” ama “Xarun soo Jiidasho Leh.” Inanka ama inanta Soomaaliyeyd meel kasta ay joogaan kol kasta wey u hanqaltaagi doontaa Muqdisho. Cid iska hortaagi kartaana ma jirto. Waana calaamada ah in ay “xarun soo jiidasho” leh ay u tahay Soomaali. Illaa qarnigii 11aad sidaa ayey ahayd Muqdhiso.
Waa magaalo uu Ibna Batuuta ku sheegay 1340kii magaaladii ugu weyneed uu arkay tan iyo intuu marayey Magrib ama Waqooyi-galbeed? (Afrika.) Xilligii uu Ibna Batuuta soo gaadhay Muqdisho waxa u aad ula fajacay cuntada badan, afafka kala duwan ee lagu hadlayo, iyo dadka Soomaaliyeed iyo kuwo kaleba oo meelo kala duwan ka yimid.
Qarnigii 15aad iyo 16aad waxa Muqdisho laga difaacay Portuguese. Boqorkii Cumaniga ahaa qudhiisu wuu ku daahay waa se laga xoreeyey. Gaaladii timid ee arliga qabsatay waxay Muqdisho u bixiyeen “The Pearl of the Indian Ocean,” ama “Jawharadii Badweynta Hindiya,” waxayna ugala jeedeen quruxda Eebe ku manaysta dhulka Soomaaliyeed.
Xamar ama Muqdisho maxay ka yaqaanaan kuwa hada la adeegsanayo in ay ka dhigaan meel aan lagu heshiin karahayn, sida kuwa Villa Soomaaliya adeegsanayso. Adeegayaasha Villa Soomaaliya kulaba fahmi maayaan inta wax ila fahmi halkan ka dhugta qoraal ku aadan Muqdisho oon barbar dhigayo Los Angeles. Waxaan qoray 2005.
A Tale of Two Cities: A Personal Perspective on Mogadishu and Los Angeles
Caliyow adigu ha dumin Muqdisho! Wallaahi adaan kaaqa baqayaa in aad duulaan ku tahay Muqdisho!
Waa marka labaad e, Muqdisho anigaa kaaga horreeyey kaagana lexejelo badan saa waxaan ogahay waxay tahay taariikh ahaan iyo Soomaali halka ay kaga jirto.
Isbarbar dhig: 1970kii qayd ayaad xidhnayd oo maqal adhi ah ayaa la joogtay. Maantana meelo aan ogahay ayaad warka u kala qaadaa. Anna 1970kii 15 May iyo Sakhaawudiin Sare ayaan macalin ka ahaa. Ardadii aan aflixiyey waa safiiro, injineero iyo wasiiro. Waxaan Muqdisho ku soo biiriyo mooyee wax kama ridin.
Ilaah baan kugu dhaarshee Caliyoow oo waa bil Ramadaan e bal saddex arrimood oo anfac u leh reer Muqdisho ood ku kordhisay noo sheeg?
Aniga oo cilmi kordhsi raadin ayaan imid Mogadishu. Waanan ka helay. Mahadsanid Muqdishay! Adna RBG ayaad la timid. Welina guriga ayuu kuu dhexyaal. Labadeenuba xilliyo kaladuwan ayaynu nimid. Waxaa se la inaga rabaa ilaalinta iyo wax-u-qabad ummadan u faa’iideeya. Waxaa se inta dhaafsiisani waa ku qadhaabsi magaca Muqdisho. Aniguna arrinkaas ma gayo.
Xilliyadii adkaa ee 1990 ayaan difaacayey Muqdisho, booskaaga, adiga iskaba daa iyo kuwa ku weegaarsan halkay joogeen? Halkay joogeen markaanu sameynay Ergo oy kamid ahaayeen Toogane, Axmed Xuseen Xayle (AUN) iyo Saciid Samatar (AUN). Ama xilligii Israac oy kamid ahaayeen Xoosh(AUN), Dr. Cabdi Nuur, Abuukar Arman, Xussen Warsame iyo rag kaleba.
Mugdisho waa in dagaalka adiga iyo kuwa kaleba aad ka ilaalisaan. Ogow oo sida aad u leedahay anakaa leh Muqdisho anigu si ka duwan ayaan u arkaa;
1. Waa meel geeska Afrika taariikh Islamic ah oo facweyn ku leh.
2. Dhismayaal taariikheed oo Aadamigu ilaashan rabo (historical resources) ayaa ku yaal.
3. Taariikh la xidhiidha dagaaladii Diimiga ahaa ee the ‘Crusader wars’ ayey Muqdishi qayb mug leh ka qaadatay.
4. Taariikh Cumaani ah iyo in ay ahaayd xaruntii Sayyid Albarqash oo boqor u ahaa ilaa zanziber ayaa ku duugan.
5. Taariikh gumeysiga iyo Talyaani xilligiisii iyo dhismayaashii Yurub ee “Gothic” la yidhaa oo hadda burburay ayaa sumad u ah.
6. SYL iyo isu keenkii Soomaaliya oo horseeday in dad badan oo kala duwan soo dagay ayaa iyana xisaabta ku jirta.
7. Burburkii Muqdisho ee 1990kii xanuunkiisii ayey haysaa.
8. Soo kabashadii Muqdishu iyo dhibaatooyinka ku gadaaman sida qorshayn la’aanta, siyaasada, iyo dhaqaale oo weli ina sugaysa.
Mogadisho waa meel aad ugu baahan hawlo cilimiyesan. Uma se baahna guulwadayn iyo jeeb ka buuxsi. War la waado iyo dagaal siyaasadeed ood hadda qabyaaladaysana waa shaqada laguu igmaday. Meel se ma gaadhayso.
Haday Muqdisho dunto, si ku meelgaadh ah dawladda waa looga wareejin karaa. Taariikhdana wey dhacdaa. Intaasi hadaaban ku leeyahay. Dib-u-dhiskuna wuu adagyahay. Sidaas darteed, war Caliyoow Muqdisho HA DUMIN!
WQ: Faisal Rooble | Twitter: Faisal Roble
Siyaasadda & Dhaqaalaha 503 Uncategorized 9767 Wararka 26508
Saaka & Dunida iyo Cabdifataax Cumar Geeddi, Daljir Doolow (dhegayso)
Caawa & Daljir iyo Cabdifataax Cumar Geedi, Daljir Doolow (dhegyso)